Waxaan mar dhaw idinla wadaadi doonaaa Hindi Af Somali ku baxayo kuwaasoo ka koobnaan doono jaceyl iyo jug. Waxaad ku daawan doontaan si free ah.
Waxaan meesha ka marneyn muuqaaladii dalkeena hooyo kuwa ka turjumayo bilicda iyo horumarka dalkeena hooyo.
Sidoo kale sawiradii ugu danbeeyay ee dalka oo aan idinla wadaagi doono. Somger waxa ay u adeegeysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed. La soco somger.com: Muuuqaalo ku farxadgeliyo.